Coronavirus, waa bulsho adkeysiisa ama guuleysata bini-aadamka? : Martin Vrijland
Coronavirus, waa bulsho adkeysiisa ama guuleysata bini-aadamka?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 23 Maarso 2020	• 10 Comments
Coronavirus-ka ayaa sida muuqata ku keena adkayn ballaaran oo bulshada dhexdeeda ah. Waad ku arki kartaa taas dhammaan weerarada lagu qaado warbaahinta bulshada ee ku wajahan qof kasta oo ku dhiiriya inuu muujiyo fikrad ka duwan. Khalad ha sameyn. In ka badan 7 sano oo aan qorey, waxaan ogaadey in tirada askarta rayidka ah ee ku toogta rasaasta ay ku garaacdo dadka warbaahinta bulshada inay ka badan tahay tirada askarta oo ku labisan dareyska qoryaha. Kaliya waxay ku jiraan liiska saaxiibbadaada waxayna leeyihiin nashaadaadyo xarago badan oo umuuqda kuwo aan badan bixin, laakiin si fiican ayey ula qabsan karaan waxayna hadda waqti badan ku qaataan gadaal furaha. Miyay leeyihiin gobolka gag? Joojinta faa iidada, xukunka oo la dhimay?
Markaad aqriso buuggayga, waxaad ogaatay in xaqiiqda sidaan u aragnay inay si xoogan saameyn ugu leedahay dadkan tirada badan ee horey looguntay oo ay horeyba u isticmaali jirtay in lagu bixiyo lacagta gobolka, sida ugu dhaqsaha badan waxay noqon doontaa dacwadda qof walba. gobolka shuuciga wadajirka ah ee teknoolojiyadda oo hadda laga duulayo. GDR-ka hore ee Midowgii Soofiyeeti, ka hor dhicitaanka gidaarka Berlin, 1 ka mid ah 50kii rayid ah wuxuu ahaa Inoffizielle Mitarbeiter (IMB). Xaqiiqdii ma u malayn weyday in nidaamkani uu ku lumi lahaa sanduuqa boodhka haddii boodhka lagu guuleysto? Si fiican u fiiri hareerahaaga.
Qof kastaa wuu arkay saameynta dhibaatada dhibaatada coronavirus. Gobolku ma leeyahay tobanaan balaayiin la heli karo hal mar si uu ula wareego mushaaraadka, ka caawiyo ganacsatada u baahan, iyo dib u dhigista canshuuraha la soo celiyo? Sidee taasi macquul u tahay? Muddo sanado ah, austerity ayaa la riixay oo hadda qasabadda si lama filaan ah ayaa loo furi karaa gebi ahaanba! Waxaan si qarsoodi ah u aragnaa soo gelitaanka daqliga aasaasiga ah (sida hanti wadaagga). Dakhligaas aasaasiga ah ee Inoffizieller Mitarbeiter laga yaabo inuu si qarsoodi ah ugu raaxeysto muddo dheer.
Kaalmadaas si lama filaanka ah ee deeqsinimada guud ee dawladda ayaa laga yaabaa inay ka timaado € 750 bilyan dheriga ECB dib ayaa loo daabacayt leeyahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira weel kale.
Wixii ka dambeeya rubuc-4 ee 2019, 1560 bilyan oo yuuro hawlgab ayaa goob joog ahaa dhammaan lacagaha hawlgabka. Lacagta ugu badan ee howlgabnimada waxaa kamid ah ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverhein Patten) iyo PM Wadajir ahaan waxay lahaayeen qiyaastii Lacagta 909 maalgashatay caasimada. Maalgashiga hawlgabyada iyo maal-gashadayaasha kale ee hay'adaha waxay bixiyaan mugga ugu badan ee ganacsiga isdhaafsiga saamiyada Amsterdam.
Lacagahan howlgabka ah waxaa si daran ugu dhacay hoos u dhac ku yimid suuqyada saamiyada inta lagu gudajiray mashaqada Corona. Waxaan si faahfaahsan u sharaxey in dharbaaxaani uu si kasta u soo dhacayay maqaalkani.
Saxaafada ayaa hada soo tabineysa in aysan jirin raasamaal ku filan oo ku filan oo lagu buuxiyo dhamaan dheefaha howlgabka ee ay balan qaadeen kaqeyb galayaashooda hada iyo mustaqbalkaba. Isugeynta saamiga maalgalinta ayaa hoos uga dhacday 29 boqolkiiba ilaa 101 boqolkiiba 95 maalmood gudahood (Sun.) Trouw ayaa wariyey mar hore Maarso 2). Taas macnaheedu waa in ay jiraan 95 senti oo lacag caddaan ah oo loo cayimay euro kasta oo hawlgab ah oo la qeexay. ECB waxay sanado siineysay xirmada xirmooyinka QE (tirada yareynta). Shirkado badan ayaa awood u yeeshay inay ku hayaan sicirkooda saamiga si farsamo ahaan aad u sarreeya, maxaa yeelay waxay runtii awood u leeyihiin inay amaahdo lacag ku dhow dulsaar eber ah isla markaana bangiga dhexe uu dib u iibsaday deyntaas. Ilaa iyo inta aad ka iibsato saamiyadeeda, lacagtaas ma geli doonto suuqa, laakiin waxay ku sii jiri doontaa lakabka maalgashadayaasha hay'adaha.
Imika oo gobolka Nederland uu tobanaan balaayiin ah bulshada ugu dhex abuurayo (oo laga yaabo inay ka timaado ECB), lacagtani waxay ku dhammaan doontaa bulshada dhexdeeda. Ka dib oo dhan, waxaa la siiyaa taageero loogu talagalay dadka sida ugu dhakhsaha badan u iibsan doona cuntada iyo cabbitaannada. Hadaad daabacdo tobanaan bilyan sida QE oo tani ay sii socoto inay ku wareejiso lakabka maalgashadayaasha hay'adaha, saamayn yar kuma laha qiimaha lacagta nolosha dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tuujisid tobanaan balaayiin oo aad dadka siiso, waxay taasi horseedi kartaa sicir barar. Taas macnaheedu waa in taageerada loo ballanqaaday ay weli ahaan karto dad badan oo raaxo badan qaarna waxay ku raaxeysanayaan dareenka fasaxa ee fadhiga gurigooda, laakiin taasi hadda xiiso uma leh 1 toddobaad kadib. Marka sicir bararku dhaco, isla markiiba way dhib noqotaa in la buuxiyo boorso kale oo raashin ah oo afka laga quuto.
La yaabi maayo markaan arko qarameedka qarashka howlgabka. Xaqiiqdi marka la eego xaqiiqada ah in lacagaha hawlgabka ay sidoo kale ku jiraan dammaanad dowladeed (deyn deyn ah) mar labaad oo haddii dowladda ay lacag ka hesho ECB, waxay mar labaad noqdaan kuwo qiimo yar.
Waxaan u maleynayaa inaan ku jirno wareegga guud ee wareega, kana dhaqaaqno waxaan u maleynayaa inay tahay dimuqraadiyad loona wareejiyo maamul wadaaga shuuciga (nidaamka xakameynta dhijitaalka). Gaar ahaan meel dhexe Wax kasta oo aan horay u ogayn way is beddali doonaan (oo ay ku jiraan hawlgabyada). Shirkaduhu waa qaran ahaan maahan, toos maahan, laakiin talaabo talaabo ah qof walbana wuxuu heli doonaa daqli asaasi ah. Dakhligaas aasaasiga ah waxaa la dammaanad qaadi karaa oo keliya haddii uu jiro dib-u-dejin dhammaystiran ee nidaamka maaliyadeed ee adduunka oo sida la filayo sidoo kale loo jiheysto tan. Mareykanka, waxaan aragnay Donald Trump oo ku dhawaaqaya tallaabooyin tan la mid ah shalay sidaan oo kale waxaa loo qaaday Netherlands. Taasi waa calaamad ku taal darbiga.
Haddii aad rabto inaad dammaanad qaaddo dakhli aasaasi ah oo aan dakhligani dhaqso u noqon wax qiimo la’aan ah sicir-bararka awgeed, markaa waa inaad runtii baabi'isaa deynta weyn ee deynta lacagta daabacan. Oo la siiyo in lacagaha hawlgabka ay yihiin kuwa haysta dammaanadaha deyn ee dowladda Nederland, raasamaalkii beenta ahaa ee lacagahaas ayaa markaas dhammaaday.
Hadda garan maayo in baabiinta daran ee deynta oo dhami ay dhici doonto, maxaa yeelay markaa waa inaad runtii wax ka qabataa gebi ahaanba nidaamka bangiyada iyo nidaamka lacagta adduunka. Ugu dambeyntiina, si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay in shaqadu ay u socoto dhanka nidaam maaliyadeed cusub oo caalami ah.
Way sahlan tahay in la abuuro amar cusub oo ka soo baxay fowdo dhammaystiran. Waana fowdadaasi inay sii weynaan doonto. Waxaan u maleyneynaa inaan marka hore la kulmi doonno la wareegitaanka lacagaha howlgabnimada ee dowladda Nederland. Xaqiiqdi, qaranimaynta lacagaha hawlgabka waxba kama badna iibsashada lacag aad u badan oo daabacan tufaax iyo ukun, laakiin tirada xisaabtaada ayaa u muuqata kaliya boqolaal bilyan oo ka sarreysa waxaadna bixin kartaa wax badan.
Si loo soo koobo sheeko gaagaaban: Waxaan aaminsanahay in sicir-bararku yahay waxa aakhirka ka kaxayn doona dadka reer Holland xiritaankooda xidhitaanka. Gaajo!
Waxaan wali ciyaaraynaa warbaahinta iyo siyaasiyiintii ka duubay fiidiyoogooda dad wax loo dhimay (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) oo loo maleynayo inaysan u jiheyn masaafada 1.5 mitir si ay u abuuraan albaaniyadii aan saadaaliyay laba toddobaad: coronavirus wuxuu ka baxayaa gacanta “maxaa yeelay waxaan ahaa mid aad u dabacsan” sidaa darteed hadda waa inaan ku xirnaa xir xire ka sii adag marka loo eego France iyo Spain.
Xadhigaas adag ayaa sidaas awgeed lama huraan looga iibiyay dadwaynaha. Dhanka kale, waxaan sidoo kale maqli doonnaa taas coronavirus ayaa wax iska beddela iyo in dhammaan ay noqdaan kuwa aad uga khatar badan. Marka waxaan dooneynaa inaan helno nafteena xaalad qof walbaa uu ka baqo ninkeeda ama ninkeeda iyo in hadii aad qof la kulanto, tani ay ku dili karto. Markaa, qofkasta oo si xor ah u safraya wuxuu noqon karayaa "diil dambiile" gacankudhiiglayaal tiro badan.
Bal qiyaas xaalada halka ay ka jirto shaqo xumo ka jirta xaruminta qaybinta ee silsiladaha tafaariiqda qaarkood. Bal ka fikir in ATM-yada aan loo oggolaan doonin inay lacag bixiyaan (sababtuna tahay khatarta infekshinka ka dhalan kara fayraskaas xun ee la is qaadsiin karo) oo ka fikir sicir barar, halkaas oo Rutte uu ka helo dakhligo asaasi ah oo dakhli kaliya kaa helo 1 rooti wiiggii iyo boorso baradho ah. Maxaa dhici doona markaas? Markaa dadku gaajoodaan ka dibna guryahooda ayay ka soo baxaan. Dabadeedna derisyadooda ayaa soo sheegi doona, sababta oo ah kuwa ku socon kara bambaanooyinka corona waqtiga bambooyinka waa khatar naftooda iyo qof kasta oo ay garanayaan. Markaa waa in ciidanku soo dhex galaan oo waxaan arki doonnaa in dad badani baaba'aan. Taasi maahan wax cabsi badan, taasi waa fikir macquul ah.
Ka dib waxaan ka marag karnaa qalalaasaha Yurub ee aan waligey filayay. Meesha ay fowdadu xukumaan, sida caadiga ah waxaa jira xoog cusub oo kusoo duushay inuu wax hagaajiyo. Waad ogtahay wadanka aan kujiro la saadaaliyay sanado. Dhammaanteed waa qoraalkii Master oo waxaan ku sifeynayaa buuggaas 'Master Master' ee ku yaal buuggayga. Hadaad akhriday buuggaas iyo wixii ku soo kordhay buuggaas ee ku yaal goobta, waxaad ogtahay inay rajo jirto. Laakiin taasi waxay qaadataa xoogaa qoto dheer. In la arko waxa socda waa mid macquul ah oo macquul ah. Markaa waa diyaar oo waad ogtahay heerka aad wax ka qaban karto.
Soodhawrka xiriiriya: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
Tags: geesinimo, mid iyo badh, dakhliga aasaasiga ah, coronavirus, featured, sicir barar, xirid, meter, Rutte, taageero
23 Maarso 2020 at 10: 10
Marka lagu daro warbaahinta bulshada, oo qof walba (sida la sheegay) uga digayo inuusan qofna qaadin mas'uuliyaddiisa isla markaana uusan raacin awaamiirta "leexinta bulshada" ee (waxa loogu yeero khubaro), wargeysku sidoo kale wuxuu maanta digniin buuxda ka yahay maanta.
Khabiirka talefishinka ee argagaxa leh, oo madax u ah shuruud ayaa maanta madax u ah: KU SOO DHAWAADA CUDURKA ”. Badhasaabyada iyo saameeyayaashu waxay ka digayaan oo wax u beertaan argagax in Netherlands ay si buuxda u dayacday awaamiirta walaalkii Weyn, iwm.
Dadku waxay u diyaar garoobayaan xidhitaanka guud waana khaladkeena oo dhan.
Keebaa yaab leh (waxaan u maleynayaa inay la yaab tahay) inaan aniga iyo saaxiibadayda wareegtada ah (waxaan leenahay saaxiibo isku wareeg ah) ma ogi cid qabatay ama soo qabatay corona, wax walbana waxay ka yimaadeen wargeyska, Nieuwsuur, Youtube.
Sidoo kale waa wax lala yaabo in dadbadan oo caan ah oo aduunka oo idil ay leeyihiin corona, (dabcan iyagu ma ahan kuwa saameyn ku leh sida aan u maleynayo) waxay umuuqataa in virusku inta badan isha ku hayo dadka caanka ah (siyaasiyiinta, fanaaniinta, heestayaasha, xidigaha filimada iyo inaan la xusin caanka. Ciyaaraha fudud).
Tan waxaan u arkaa inay caadi ka tahay fayraska loo yaqaan 'corona virus' Waxaan u maleynayaa inay takooreyso, maxaa dad caan ah oo keliya?
23 Maarso 2020 at 10: 40
Adigu waxaad lahaan jirtay xubnaha NSB .. hadda ma waxaan haysannaa xubnaha IMB?
23 Maarso 2020 at 11: 24
Haddii aad si dhow u eegeyso, runtii waa xubno ka tirsan NSB. Tani waxay sharrax ka bixinaysaa sababta ay dad badan oo noocan ah Nederland ugu noolyihiin iyo sababta ay ugu fududahay dawladda halkan in ay abaabusho oo farax geliso dadkaas, taasina xitaa lacag kuma lahan.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Jarmalka ayaa mararka qaar ka cawdo in Nederlandku ay aad u jeclaayeen inay caawiyaan oo khiyaaneeyaan dadka kale ee walaalahooda ah. Qaar ayaa ka cawday sababtaas awgeed inay hayaan shaqo badan isla markaana aad ugu mashquulsanaayeen sidii ay u sii wadi lahaayeen soo kicinta khaa'imiintaas.
Nederlandayska (maahan dabcan) waxay leeyihiin masayr aad u qallafsan oo aad uga badan, tusaale ahaan, Jarmalka, Beljamka iyo xitaa Faransiiska, badanaa ma siinayaan qof kale oo reer Holland iftiinka indhaha, markaa maxaa ka fiicnaan kara khayaanada dadkaaga dalka tan iyo tan sidoo kale abaalmarin fiican oo lagu kasbado, waxaan ka shakisan nahay inay jiraan liis sugitaan dadka doonaya inay noqdaan IMB.
23 Maarso 2020 at 10: 18
Wadada fog waxaan arkay lamaanayaal gacmaha is qabanaya oo midba midka kale is dhunkanaya (wax qalad ah kuma jiraan) sida qoolleyda oo kale, wiil iyo gabar.
Haweeney ayaa dhaaftay lammaanaha waxaan maqlay iyada oo leh, miyaad joojineysaa taas oo wiilkii lamaanaha ahaa ayaa naxay oo weydiiyey waxa socda. Waxay tidhi, iyadoo qaylinaya: "Waad ogtahay inaadan ahayn qof waalan." Wiilkii: "Ma'am deggan, ma jiraan wax laga walwalo". haweeneydu waxay noqotey mid kacsan oo bilaabay inkaar, way ka bixi laheyd gacanta, lamaanaha ayaa aamusnaan ku sii waday wadadooda, haweeneyda ayaa istaagtay.
Fiiro gaar ah u yeelo midba midka kale
23 Maarso 2020 at 11: 16
Saamaynta mister smith ee ficil, ama yaa garanaya, in gabadha macaan tahay xubin cusub oo NSB ah (oo sidoo kale loo yaqaan cinwaanka 'inofficieller mitarbeiter').
23 Maarso 2020 at 11: 07
Bangiyada maanta magaaladeyda waa xiran yihiin (tijaabada ma la socotaa? Si loo arko sida dadku u falceliyaan)?
Waxaan rajeynayaa talaabooyinka usbuucyada / bilaha soo socda ee sida caadiga ah ugu baahnaan lahaa wax badan oo lahjadaha Hegelian ah ka hor inta aysan dadku diyaar u aheyn inay aqbalaan.
xoogaa tallaabooyin ah oo aan arko (ma aqaan haddii ay dhacaan laakiin waxaan u maleynayaa inay dhici karaan) iyo natiijadooda:
1) pin xadidid kaarkii maalin kasta / asbuuciiba, tusaale ahaan, 50 euro. (abuurista cabsi fowdo iyo in dadka loo adeegsado lacag la'aan)
2) ama ATM-yada oo furma daqiiqado yar maalintii / usbuuc (abuuritaanka fowdo iyo baraarug la'aan)
3) hordhac (dabcan ku meel gaadh, laakiin maalmahan waa wargeys joogto ah) soo bandhigida daqliga aasaasiga ah
4) soo bandhigida daqliga aasaasiga ah kahor kordhinta cashuurta ee ku meel gaarka ah waxay u horseedi doontaa, tusaale ahaan, 90% dadka loo yaqaan 'SMEs / freelancers' kuwaas oo wali guuleysta isla markaana kasbanaya lacag fiican ama kuwaas oo, sida ay qabaan aqoonyahanada, ay macaash ka helaan xiisadda.
5) xishoodka ganacsatada sida la moodaya inay ka faa’iidaystaan ​​xiisadda oo ay lacag helaan maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwa caqli badan oo ku filan inay la yimaadaan hannaan dakhli wanaagsan oo ku jira heerarkan 'corona hype'. (Waxaan u arkaa inay sidan wax badan uga dhacayaan warbaahinta bulshada iyo bogagga garabka bidix)
6) Kordhinta lacagaha hawlgabka iyo warshadaha. (SMEs ayaa markii dambe ku dhacay xannibaado iyo koror ballaaran oo canshuuro ah (oo loogu yeero canshuurta wadajirka ku meelgaarka ah) in dhammaantood ay kharribmaan, oo ay ku jiraan shirkadahaas oo weli sameeya lacag wanaagsan inkasta oo xiisadda ay jirto.
7) dhaqammo badan ayaa sii ballaaranaya oo aad u xoog badan, suuqa saamiyada ayaa gebi ahaanba burburay. Shirkadaha sarrifka saamiyada ayaa qaran ahaan loo maleynayaa (oo loo maleynayo inay si ku meelgaar ah) ay u yihiin dowlado waxaana dib uga soo iibsaday masraxa indheer garadka (haddii aysan gacantooda ku jirin hadda).
8) Hordhac Degdeg ah 5g adduunka oo dhan oo loogu talagalay nabadgelyada iyo in laga hortago faafitaanka fayraska ku xiga.
23 Maarso 2020 at 12: 15
Marka miisaaniyadaha hawlgabnimada qaran ahaan la sameeyo, shaybaarada gobolka ayaa la shaabadeeyey. Tani waa habka loo yareeyo deynta dowladda. Waxaan horay u aragnay arin sidan oo kale ah wadan sida Hangari, halkaas oo lacagihii howlgabnimada gaarka loo leeyahay ee qaran ahaan loo dejiyay iyo deymihii dowlada (oo ku xiran GDP) isla markiiba hoos u dhacday. Tusaale ahaan, dawladdu waxay ka takhalusi doontaa qayb badan oo deymaha ah, taas oo u badan tahay inay u fiican tahay baananka halkii ay uga sii dayn lahayd sicir barar. Tan dambe sababta oo ah baananka ayaan dooneynin kuwa deynta guryaha leh inay sidan uga takhalusaan deyntooda. Hantida ayaa dhici doonta sababtoo ah bixin bixinta amaahda billaha ah ee bangiyada awgeed.
23 Maarso 2020 at 13: 33
Haddii dadku aysan bixin karin amaahda guryaha, bangiyada ayaa la wareegaya.
Haddii bangiyaduhu qaran ahaadaan (eeg ABN AMRO), markaa dowladdu waxay isla markiiba lahaan doontaa guryahaas oo dhan ... Wadaagsi farsamo wadaag
23 Maarso 2020 at 13: 07
Warbixinta markhaatiga EAR:
Jimcihii la soo dhaafay waxaan la hadlay nin reer Afqanistaan ​​ah oo cararay kaas oo kobcinaya dhaqaalaha Dutch sidii ganacsade ahaan. Wuxuu ka sheekeeyay saaxiib wanaagsan oo ku sugan Shiinaha. Saaxiibkaas waxaa lagu karantiilyay qoyska (xaaskiisa iyo 2,5 caruur ah) 3 bilood. Waxay ka heleen nooc ka mid ah foojarka waraaqaha gobolka. 1 qof oo reerka ah ayaa loo oggol yahay inuu wax ka iibsado maalin kasta. Soo sheegidda waa in lagu sameeyaa nooc ka mid ah barta hore loo go'aamiyey. Sharci dejinta taleefanka iyo foojarka. Suuqyada waa weeyn ee furitaanka, laakiin badanaa 1 furan. Waxaan weydiiyey waxa ku saabsan shaqadiisa (warshadda tolidda). Nasiib wanaag taa sidoo kale waa “la xaliyay”. Kirada iyo korontada mar dambe lama bixin, shaqaalaha waxaa siisay gobolka si ay cunto ugu soo iibsadaan.
Goor dambe markii aan guriga joogay, oo aan ka soo kabtay macluumaadka, su'aalo badan oo aan doonayey inaan weydiiyo. Si kastaba ha noqotee, fursadda aan awood ugu yeelan doono inaan shaqsi ahaan ula xiriiro asbuuca soo socda ayaa sii yaraanaya maalinba maalinta ka dambeysa.
1 = midna
mid = midna
Haddii aad weydiiso su'aalaha saxda ah, gaar ahaan su'aalaha ku baaqaya fasiraad ficil ah oo ku saabsan koorsada maalinlaha ah ee dhacdooyinka / aragtida, sawir weyn ayaa si toos ah u soo muuqan doona. Waana wax fudud in lagu dhammaystiro iyadoo la adeegsanayo garashada bal inuu jiro daacadnimo ama been abuur run ah
Attn zzpers oo hadda iska diiwaangashanaya wajiga caawinta kama dambaysta ah. Sharciga Kaqeybqaadashadu wali wuu shaqeynayaa. Qaado magdhow = wax ku biiriso. Haddii aysan jirin shaqo aad adigu dooratay, markaa shaqo ayaa jirta. Taasi sidoo kale waa qaab dakhli ... waqtiyadii hore, nidaamka feeraha ama khamri cusub oo ku jirta bacaha duugga ah?
Hel caawimaad sharci? Taasi sidoo kale waa wax la soo dhaafay. Maxkamadaha hoose (madani) ayaa xiran illaa ogeysiis dambe.
kulligeen innagu waa isku mid, bal halqabsashadayga ku qabow, xayeysiiska ku soo dhacayaa ha ii jawaabin
Si kastaba ha noqotee, ugu sarreysa ee guga ayaa jira. Maxaa yeelay annaguna sanka ayaa na qabsaday. Nature wali waa 6 usbuuc inaga hore, jadwalka kal hore waa 6 usbuuc. Eeg Itsjing / jaap voigt shaqada kuna noolow xilliyada
Raac dabeecada oo waxaad tahay dabeecad run ah! Qaybaha-ka-socda (waaxda) iyo waardiyaasha (waaxda) inkasta oo….
Dib-u-dejin maskaxeed!… .Haddii aad weli rabto inaad bixiso “caawimaad”…
marijke ayaa qoray:
24 Maarso 2020 at 05: 36
Martin:… .. “Halkee lacagtaasi ka timid ?? `
Marka laga reebo in dad badan oo hawlgab ah ay hadda dhimanayaan, oo lacagta hawlgabka ah ee ay dawladdu si dhab ah u lumiso
sidaas darteedna dheryihii bisilku si buuxda ayey u buuxsamayaan (oo ay ku bixin karaan waxyaabo badan….)… .is
Waxa kale oo jira wax kale oo: Waxaan runtii ka akhriyey 10 (!) kahor in reerahaas aadka u hodanka ah (ee loo yaqaan illuminati, Rothschilds, Rockefellers iwm Maaddaama ay leeyihiin wada jir ah in ka badan 2 0 0 GANACDO (ka dibna lagu qiyaaso, laga yaabee intaa in ka badan hadda) waad qiyaasi kartaa inaysan dhaafi doonin 2 tiriliyanka guud ahaan. Taas oo 0 tiriliyan ahaan ahaan bangi ahaan loo isticmaali jiray adduunka oo dhan, kaasoo hadda dhacaya. Isla qodobkaas, oo aan nasiib darro dambe u lahayn xiriir, waxaa sidoo kale la yiri wadarta guud ee dadka ka baxsan qoysaskaas, sidaas darteed dhulka, waxaa lagu qiyaasey 0 trillion oo keliya. Nalalka ayaa markaa leh 7 jeer qaddarka lacagta, iyadoo dadka dunida oo dhami ay yihiin 8 bilyan oo qof.
2 0 0 tiriliyan, haddii aad leedahay 850 tiriliyan markaa waa danbi. 2 0 0 tiriliyan waa 200 oo leh 18 oo 'eber', marka waa runtii: 2 0 0 bilyan x x hal bilyan. Isla qodobkaas ayaa sidoo kale lagu sheegay in laga bilaabo dherigaas, waqtigan la wareego, mid ayaa bixin doona ku dhawaad ​​aan xadidneyn DHAMMAAN dowladihii oo dhan, WAA MAXAY U BAAHAN YAHAY in lagu bixiyo kala wareejintaan !!! Waxaa xooga la saaray qodobkaas
'la wareegida', iyo MAYA waxa ay ku kici lahayd. Ujeedada ugu dambeysa waxay ahayd mid la wareegeysa la wareegitaankan
lacagtuna muhiim ma ahayn.
Maqaalka wali waa la heli karaa, laakiin raali gelin laga bixiyaa xiriir la'aan, waqti aad u fog. Xaqiiqdii waxaa jiri doona faallooyin kuwaas oo xusuusiya maqaalkan?
« Markay wadarta guud ee xirida coronavirus iyo waxa ay u egtahay: waraaqaha baaritaanka iyo ciidanka
Bill Gates 'tirada xaddiga' kaarka aqoonsiga bilaa-waayirka ah ee isha ku haya inaad qabtid cudurka 'coronavirus' iyo haddii lagu tallaalay iyo in kale. »
Guud ahaan Wadarta: 1.455.754